Ihe ọkụ ọkụ n’akụkụ dị iche iche nke ahụ na-egosi ọrịa dị iche iche. – Noor Health Life
Ihe ọkụ ọkụ n’akụkụ dị iche iche nke ahụ na-egosi ọrịa dị iche iche.
Usoro nke inwe pimples na ahụ anyị bụ ihe okike ma ọ bụrụ na ha amalite ịba ụba n’akụkụ ụfọdụ, ha na-egosi ọrịa.
Ọ bụrụ na pimples pụtara n’akụkụ a, ọ bụ ihe ịrịba ama nke mmebi nke gland adrenal.
Oke nrụgide ọrụ na nchekasị nwekwara ike ịkpata ọkụ n’akụkụ a nke ahụ, ọ bụkwa ihe na-egosi na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike, ya echegbula onwe gị wee dajụọ.
Noor Health Zindagi na-agbalị inweta ihe kacha mma n’ime gị na nnukwu ndị dọkịta nwere Noor Health Zindagi. Dọkịta na-awa ahụ Onye ndụmọdụ. Ndị ọkachamara. Working Noor Health Life na-enyere ndị ogbenye aka, anyị na-arịọkwa gị ka ị sonye na ọrụ a ma kwado Noor Health Life. GỤKWUO.
Ọ bụrụ na ọkụ ọkụ na-apụta n’obi, ọ pụtara na usoro nri nri gị anaghị arụ ọrụ nke ọma na ị ga-agbanwe nri gị.
Ihe na-akpata nfụkasị ahụ bụ enweghị vitamin, nke a apụtaghị na ị ga-amalite ịṅụ ihe mgbakwunye vitamin kama na-edozi ụkọ site na nri.
Ihe kpatara nke a bụ mmụba nke shuga n’ime ahụ, yabụ, ejila shuga na achịcha buru ibu, kama nwee afọ ojuju na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
N’elu ụkwụ na n’okpuru toso
Ọ bụrụ na ị na-eji ncha na-adabaghị na akpụkpọ ahụ gị, mgbe ahụ, ọzịza na-apụta na mpaghara a, yabụ lelee ncha gị, ihe ọzọ kpatara nke a nwere ike ịbụ ọrịa akpụkpọ ahụ.
Akụkụ elu na etiti nke ukwu
Ọ bụrụ na ị naghị ehi ụra nke ọma mgbe ahụ pimples na-apụta n’ebe a, n’otu aka ahụ ị na-eri nri nwere calorie.
Ihe na-akpata ọkụ ọkụ bụkwa nsogbu mgbari nri, ọ na-egosikwa na ị naghị eri ezigbo nri. Ihe na-akpata na ọgwụgwọ nke pimples.
Ọtụtụ mgbe, anyị anaghị ama ihe mere anyị ji na-enwe pimples n’ihu anyị, ọ nweghị kpọmkwem ihe kpatara ezé ji apụta mana enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara nke a, ụfọdụ ihe kpatara ya na ọgwụgwọ ha bụ ndị a, ka anyị kwuo maka ha, gwa gị n’ime ya. nkọwa ụfọdụ.
Enweghị nri kwesịrị ekwesị na nnukwu oriri nke carbohydrates dị ọcha nwere ike ime ka ọnya afọ ọ bụla. gị onwe gị nwekwara ike ime ka nri gị dị mma na nke ziri ezi.
A na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ a na-akpọ blue light therapy taa na-ewepụ pimples n’ihu, ụzarị anụnụ anụnụ ndị a dị ike na-abanye n’ime akpụkpọ ahụ na follicles wee gbuo nje bacteria. , ọgwụgwọ a kacha mma maka iwepụ ihe otutu na ịchacha akpụkpọ ahụ.
Mmanụ tii a na-ewu ewu na nke dị nro ma e jiri ya tụnyere benzoyl peroxide bara uru maka ịgwọ ụdị ihe otutu na afọ ọ bụla. ma na-ebelata mbufụt nke anụ ahụ, a na-ejikwa mmanụ a n’ọtụtụ ude, ncha ihu na ncha.
Dị ka ndị ọkachamara n’ihe gbasara akpụkpọ ahụ na ndị ọkachamara n’ahụ ike si kwuo, belata nnu na nri gị, Noor Health Life na-ekwu na otu n’ime ihe ndị na-ebute ihe otutu bụ ịṅụ sodium dị ukwuu, lezie anya mgbe ị na-eri nri, ọ ga-akara gị mma iri ihe na-erughị ya. 1500 mg nke sodium kwa ụbọchị.
Nchegbu na-enwe mmetụta na-adịghị mma na arụ ọrụ nke homonụ. Nchegbu anaghị enwe mmetụta kpọmkwem na akpụkpọ ahụ ma mgbe ọ bụla ị na-echegbu onwe gị, pimples na-apụta na akpụkpọ ahụ gị. enwere ike iji usoro belata nchekasị nke nwere ike ime ka ọnọdụ uche gị dajụọ.
Maka nsonaazụ kacha mma, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ ezigbo onye na-ahụ maka anụ ahụ na mgbanwe kwesịrị ekwesị na nri gị na ụdị ndụ gị. Ọrịa ndị na-apụta na akpụkpọ ahụ.
Ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa ụfọdụ na-apụta na akpụkpọ ahụ.
Akpụkpọ anụ bụ akụkụ kachasị ukwuu nke ahụ mmadụ mana ị maara na ọ na-ebu amụma maka ọrịa?
Ee, ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa ụfọdụ na-apụta na akpụkpọ ahụ.
Ma ị maara ihe mgbaàmà nke akpụkpọ ahụ na-egosi maka ọrịa dị iche iche?
A na-ekwenyekarị na bursitis bụ mmeghachi omume nke ịṅụ mmiri ara ehi mgbe o richara azụ, ma sayensị ahụike na-agọnahụ nke a. Na akpụkpọ bụ n’ezie ọgụ megide mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ site na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, nke dị na melanin, pigmenti na-agba akpụkpọ ahụ, ọ pụkwara ịbụ ihe ịrịba ama nke autoimmune ọrịa dị ka thyroid ọrịa.
Mbufụt nke akpụkpọ ahụ
Akpụkpọ anụ, nke na-afụ ụfụ, na-acha uhie uhie na akpụkpọ ahụ na-apụtakarị n’akụkụ olu ma ọ bụ n’ikpere ọnụ, ọ bụ ọrịa anụ ahụ nke na-enwekarị ike imetụta ma ụmụaka ma ndị okenye, ma ọ pụkwara ịbụ ihe mgbaàmà nke nsogbu ahụike uche. Dị ka otu nnyocha e mere na United States si kwuo, ndị nwere ịda mbà n’obi ma ọ bụ nchekasị na-enwekarị ike ịmalite ọrịa ahụ n’oge, mana ịgwọ ọrịa dermatitis na-emekwa ka ahụike uche dịkwuo mma.
Ọbara shuga dị elu ogologo oge nwere ike imetụta mgbasa ọbara ma mebie irighiri akwara, na-eme ka ahụ ahụ nwee ike ịgwọ ọnya, ọkachasị n’ụkwụ, nke nwere ike ibute ọrịa shuga, nke a na-akpọkwa fistula.
Na ọrịa akpụkpọ a, peels na-apụta na akpụkpọ ahụ na itching na itching, ma ha na-atụkwa aka na ụfọdụ nsogbu ahụike siri ike. Dị ka ndị ọkachamara ahụike si kwuo, ndị nwere ọnọdụ a nwere 58% ihe ize ndụ nke ọrịa obi na 43% ihe ize ndụ nke ọrịa strok. Ndị ọkachamara na-ekwu na psoriasis na ọbara ọgbụgba na akwara na-akpata site na mbufụt na ihe a na-ejikọta abụọ ahụ.
Ọka pink ma ọ bụ edo
Ọrịa ahụ na-eme ka akpụkpọ ahụ gbanwee na-acha uhie uhie na pink rashes na-apụta, ọtụtụ ndị anaghị agwọ ya n’ihi na ha anaghị ewere ya dị ize ndụ, mana nchọpụta ọhụrụ a chọpụtara na ọnọdụ ahụ mụbara ohere nke ịda mbà n’obi na ụmụ nwanyị site na 28%. afọ bụ ihe karịrị 50 ma ọ bụ 60 afọ.
Ụkwụ na akpụkpọ akọrọ na gbawara agbawa
Nke a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke nsogbu na thyroid gland (karịsịa glands dị nso na ikuku), karịsịa mgbe ọ na-abaghị uru ilekọta mmiri dị n’ụkwụ. Mgbe enwere nsogbu na gland thyroid, ọ nweghị ike imepụta homonụ thyroid nke na-arụ ọrụ maka ọnụọgụ metabolic, ọbara mgbali elu, mmepe akwara na sistem ụjọ. Dị ka nchọpụta ahụike si kwuo, n’ihi nsogbu Thai Ride, akpụkpọ ahụ na-aghọ nkụ nke ukwuu, karịsịa akpụkpọ ụkwụ ụkwụ na-amalite ịgbawa na ọ bara uru ịhụ dọkịta ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ adịghị mma.
Ọsụsọ na aka
Ọsụsọ dị ukwuu na aka nwere ike ibute ọrịa thyroid yana ọsụsọ dị ukwuu, nke glands ọsụsọ na-arụsi ọrụ ike. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enweta nsogbu a n’otu akụkụ ma ọ bụ abụọ nke ahụ dịka ogwe aka, ọbụ aka ma ọ bụ ụkwụ. Ndị dọkịta nwere ike nyochaa ya ma nye iwu ọgwụgwọ.
Black lumps ma ọ bụ moles
N’ozuzu, oke ojii ojii ma ọ bụ kpụ ọkụ n’ọnụ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ọrịa kansa anụ ahụ, ebe ha na-abawanye ohere nke ọrịa cancer ara, eriri afo na akụrụ. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ịga ije ntakịrị na anyanwụ, ịdị na-arụsi ọrụ ike, nri ahụike na ịnọpụ iche na mmanya dị mkpa iji zere ọrịa cancer na-egbu egbu. noormedlife@gmail.com